မှော်ဘီရှိရောင်းရန်အိမ်ခြံမြေများ | iMyanmarHouse.com
သိန်း 300 မှ သိန်း 500 ထိ မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိရောင်းရန်အိမ်ခြံမြေများ
​ညောင်နှစ်ပင် စီမံကိန်းအနီး ပေ ၆၀x ၁၂၀ မြေကွက်ကျယ်နှင့် တစ်ထပ်တိုက် လုံးချင်း ရောင်းမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-6114226 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရပ်ကွက်သန့်မြေ ၄၀ ၆၀ လျော့ဈေးဖြင့်ရောင်းမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-6106351 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ပေ ၆၀ x ၁၂၀ ညောင်နှစ်ပင် စက်မှုဇုန်စီမံကိန်း အနီး မြေကွက်ကျယ်နှင့် လုံးချင်းတိုက် ရောင်းမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-6048816 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Near Su Poung Bus-Stop (SL 2-001230) For Sale Land @ Hmawbi Tsp.
ကြော်ငြာနံပါတ် S-6038645 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-6038508 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ပေ ၁၂၀ x ၆၀ ညောင်နှစ်ပင် စက်မှုဇုန် စီမံကိန်း အနီး အိမ်နှင့် ခြံ ရောင်းမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-5968293 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-5968180 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-5924397 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-5887735 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Near Su Poung Bus-stop , (SL 2-001230) For Sale Land @ Hmawbi Tsp.
ကြော်ငြာနံပါတ် S-5778016 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်